Aya ndiwo mashandiro anoita Press uye Bata mu macOS | Ndinobva mac
Muchinyorwa chanhasi ndiri kuzotsanangura nzira yekushanda yaungangodaro usingazive kana usati wamboshandisa mune macOS system. Nekudaro, zvirokwazvo kana iwe ukaverenga izvo zvandiri kuda kufumura iwe uchaona kuti wanga uchishandisa Press uye Bata kwenguva yakareba kupfuura zvaunofunga. uye chiitiko chakakosha mumidziyo yakadai seiyo iPhone kana iyo iPad.
Dhinda uye Bata zvinosanganisira kubata pasi imwe kiyi kuitira kuti iyo sisitimu yekushandisa iratidze iwe zvimwe zvakasiyana zvine chekuita nekiyi iwe yawakabatisa pasi
Kana iwe ukafunga nezvenzira yekushandisa yeIOS unozoona kuti kana iwe uchinyora, kana iwe uchida kuisa tilde pane vhawero kana kuisa chiratidzo chakasiyana pamusoro pevhavha, chaunofanirwa kuita kubata pasi kiyi pane chidzitiro kuitira kuti ndiratidzwe menyu inoyerera pamwe nesarudzo.
Zvakanaka, mu macOS, pane mukana mumwechete uye unonzi Dhinda uye Bata. Kana iwe ukaedza kubata kiyi inokwanisa kukupa iwe yakawanda mikana, chibharuma chinoratidzwa umo matinopihwa sarudzo yekusarudza zvimwe zvingasarudzwa nekudzvanya manhamba akasiyana. Muchiitiko chekuti kiyi iyi isina zviratidzo zvinoenderana, zvinoitika ndezvekuti kunyorwa kwakafanana kunodzokororwa.
Parizvino zvese zviri nyore, asi dambudziko nderekuti pane mamiriro ezvinhu atinofanira kumanikidza nekubata kiyi nenzira yekupinda data uye hatidi kuti sarudzo dziratidzwe nenhamba. Iyi nzira yekushanda inogona kuchinjwa kuburikidza neTerminal uchishandisa unotevera kuraira:
zvisizvo nyora -g ApplePressAndHoldEnabled -bool nhema
Kana, pane kudaro, iwe uchida kudzokera kune zvakajairika mashandiro, unofanira kunyora:
zvisizvo nyora -g ApplePressAndHoldEnabled -bool ichokwadi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Aya ndiwo mashandiro anoita Press uye Hold mune macOS